Nan Salphadhe!! - Xalayaa Jaalalaa
Ani jireenya koo keessatti jaalala durbaa hedduun qaba. Isaanii alatti jiraachuun anaaf balaa guddoo dha. Durba bareedduu arge jechuun waraabessa harree arge caalaan gorora qal’oo roobsa.
Egaa anoo ofumaan isaan jaaladha malee gaafachuu hedduu sodaadha. Hagan mana barumsaa sadarkaa 2ffaa fixutti durba takkatti osoo hin buune barnoota kiyya xumure. Yommuun kutaa 12 baradhu intala tokko jaaladhee ishee gaafachuu sodadheen ture. Karaa isheen irra deemtu yeroo maraan dhaqee iraa dhaabadha. Yoon ijaan ishee halaalatti arge karaarraan dhabama of godha. Ijashee hin baadhun ture.
Ergan Yuunivarsiitii galee boodas dubara tokko tokko waliin akka obbolaatti erga walitti siqee booda qalbiin koo waan biraa na feeti. Edaa dubarri nama akka obboleessaa fi obboleettiitti itti siqee booda damma kajeelu hin feetu. Ajaa’iba dha waan durbaa kun….
Amma gaafan Yuunivarsiitii bahutti anoo akkuma amala koo durba affeeruu, gaggeessuu qofa ta’e jiruun koo. Osoon jaalala durbaan gubadhuu bara eebba koon intala tokko hiriyyaa qabadhe. Isheen garuu akka koo jaalalaaf haaraa miti. Fixattuusheetu lafa kanarra bu’ee deema. Ishee waliin waan takkaa argee hin beeknen arge. Wantoota nama gammachiisanii fi gaddisiisan hedduu argeen jira. Yeroon ishee waliin dabarse hundaa takkaa itti gaabbee hin beeku.
Ergan amala dubaraa bareen booda durboota kaan qabee gaafachuufillee akkan ija jabaadhu na gootee jirti isheen. Anis eebbifameen hojiidhaaf gara Magaalaa Finfinnee deeme. Hojii bareedaan argadhe. Dhaabbata Inshuraansii tokko keessatti hoogganaa kutaa Teeknikaa ta’een hojjedha. Konkolaataa fi miindaa gaarii naa kennanii jiru. Ani qarshiin argadhu kana lafattan balleessun yaada. Qarshiin homaa natti hin fakkaatu. Intala ishee duraan waliin turre si’a lama ykn sadii erga wal agarre faana walitti buunee gargar baane. Anis dubara biroo soquun eegale.
Osoon soquu intala takka lafa gabaa Markaatootti argee bilbila irraa fudhadhe. Sana booda yeroo dheeraaf haasofsiisaa ture. Ammas guyyaa biroo intala bareedduu tokko naannoo Waddeessaatti argeen akkasuma wal baree bilbila erga wal jijjiiree booda hedduu odeessuu eegale. Isheen booda arge kun ana faana wal arguuf hedduu sardamti ture. Isa isheen akkas taatu kana sodaachuun jalqabe. Ishee duraa sanas inuman faana haasawa. Waan hedduullee waliin haasofnee jiraa. Akka waliin bultii ijaarrannullee dubbannee fixnee jirra. Garuu wal agarree hin beeknu. Amma osooman jedhuu isheen booda arge kunis laphee koo na mo’aa dhufte. Amma waan godhun dhabe. Muka baallammii natti ta’an.
Egaa waanuma tokko rakkoo natti hin uumu jedheen magaalaa Bishooftuu waliin deemna jedheen ishee boodaa kana beellame. Achumaan bakkan jiraadhu Qoree dhaa gara mana isheen jiraattu Laaftoo dhaqee konkolaataan fuudheen Magaalaa Bishooftuu deeme. Yommuu magaalaa Bishooftuu geenyu guyyaa keessaa naannoo sa’a sagal (9) ture. Kanaafuu, xiqqoo dheebuun waan nutti jiruuf Kaafteeriyaa tokko fuuldura Konkolaataa dhaabeen buunee seenne. Iddoo qabannee erga teenyeen booda namni nuuf ajajamtu intalli tokko dhufte. Ani mobaayila kiyya giphii keesaa baaseen Facebook banee ilaalaan ture. Yommuun dhaggeeffadhu sagalee naman beekuu ti. Gaafan ol jedhee ilaalu naman bilbilaan waggaa tokkoof waliin dubbadhee fi nama wal fuuna jedhee wal abdachiisaa turte dha. Waan jedhun wallaale. Of irratti barsiisuu sodaadheen nama lama hin dhabu jedhee ajajadhe. Lamaan keenyayyuu erga waan qorraa fayyadamne booda mana sana gadi dhiifnee baane. Yommuu baanu intalli sun natti bilbiltee ”Obboleettii koo seeraan naaf qabadhu akka hin miine” naan jette.
Intalli na faana jirtus yommuun bilbila gurra koorraa fudhu ”Obboleettii kootu sii bilbile mitii?” naan jette. Ofan wallaale. Edaa ani osoo hin beekne bilbila obbolaa lamaanii yeroo fi bakka adda addaattan fudhee oduu koo afuufaa tureera. Akkanattan lamaansaanii dhabee taa’e.
Ana Salphataa dha Magaalaa Finfinnee irraa
Amma erga salphinakee ofirratti barte nama gaarii ta’uuf carraaqi . Gamni isa darberraa barata .
dogongoruun kanuma jiru ofitti hin gaddin